China ithi AZIYI bam Antarctica kodwa isityhilela 'uphuhliso ngoxolo kwezibonelelo' - China JP Metal & Equipment
Horizontal oluludaka Pump
AH Metal akhiwe oluludaka Pump
AHR irabha akhiwe oluludaka Pump
L Metal Light Duty oluludaka Pump
M Metal oluludaka Pump
ZJ lokucoca Press lokudla Pump
ZGB Performance High oluludaka Pump
Nkqo oluludaka Pump
65QV-SP nkqo sump Pump
100RV-SPR ngerabha sump Pump
Sand (grabile) Pump
6 / 4D-G grabile Pump
12/10 G-GH grabile Sand Pump
18 / 16G-G grabile Sand Pump
2QV-AF amagwebu Pump
4RV-AF amagwebu Pump
Parts oluludaka Pump
Lyu Material Parts Wear
A05 Chrome High ingxubevange Parts Wear
Ngerabha Material Parts Wear
China ithi AZIYI bam Antarctica kodwa isityhilela 'uphuhliso ngoxolo kwezibonelelo'
China wafuna ukuba silahle iinkxalabo malunga amabhongo yayo lwemineral-rich Antarctica ngoMvulo, negosa esithi Beijing akanayo izicwangciso ukuqala lwemigodi welizwekazi.
China 's imisebenzi owandayo kwimimandla polar i yinqontsonqa njengoko Beijing lokusindleka intlanganiso yonyaka ye-Antarctica okokuqala.
Ezinye iindwendwe 400 abasuka kumazwe 42 nemizimba ngamazwe 10 ukuya qonga, leyo iqale ngoMvulo luze luphele Juni 1.
'Kusekho umsantsa phakathi kwinjongo zophuhliso ngoxolo kwezibonelelo Antarctica kunye nokuqonda kwethu Antarctica,' Lin Shanqing, usekela-intloko kaRhulumente Administration zaselwandle, waxelela oonondaba sibukela kweli qonga.
Lin akazange ukuphendula umbuzo ngoko kuthethwa uphuhliso lwezibonelelo zoxolo kodwa wabethelela ukuba 'yokujolisa ekunyuseni ukuqonda kwethu Antarctic kunye yokulondoloza ngcono okusingqongileyo Antarctic.' Antarctica eTshayina
'Ngokutsho ulwazi lwam, China wenze akukho izicwangciso umsebenzi lwemigodi e Antarctica,' wongeze Lin.
Iingcali ziye bakhulisa neenkxalabo China lolwandle usukelo lwexesha elide utsala izibonelelo ukusuka lizwekazi, leyo Antarctica uyakwalela okwangoku.
Nangona kunjalo, i-protocol of sivumelwano bengavumi umsebenzi ukususwa izinto ekrwada ukusuka lizwekazi engena uphononongo ngo-2048.
'2048 kubonakala ngathi kukho indlela elide, kodwa ... kukho inkxalabo kwaba waphakamisa ukuba Beijing noqhubeka ixesha elide' bengafuni 'qhinga kwimeko kwilizwekazi iphoswe vula ezinobutyebi uphuhliso, kubandakanywa imigodi kunye oyile negesi ukubhola, kwixesha elizayo , 'Marc Lanteigne, umhlohli kwi-nkqubo Chinese angaphandle kwiYunivesithi Massey, AFP.
'Kodwa ke, okwangoku China ithatha inkathalo enkulu ukugxininisa kwiinkalo zenzululwazi-nkqubo yayo polar, ukukhuthaza intsebenziswano kunye nabanye oorhulumente, kwaye angasusa iinkxalabo ukuba kukho amandla zabaphichothi e Antarctica,' watsho Lanteigne.
kumazwe ahlukeneyo ukugcina neziseko e Antarctica, kwindawo ekwabelwana zophando lwezenzululwazi ngokwesi sivumelwano ngamazwe 1959, nto leyo bathelela China ngo-1983.
China Kungoku nje kwizikhululo ezine uphando kwilizwekazi kunye isahlulo sesihlanu icetyelwe ngenxa-2019, nto leyo eza kubeka China nangokomyinge US kwenani iziseko.
'Ukusingatha intlanganiso eBeijing lithuba China ukuze bafumane ukwamkeleka ngamazwe (elitsha) Isigxina sabo abadumileyo kwimicimbi Antarctic,' watsho Anne-Marie paul, oyingcali kwezopolitiko yaseTshayina ezibandayo kwiYunivesithi Canterbury, New Zealand.
China akuvumelekanga ukuba ufuna naluphi na utshintsho umthetho Antarctic ezikhoyo kwixesha elizayo elingekude, paul AFP.
Kodwa yena wathi baye 'ndiyoyika ukwandisa amanyathelo olondolozo, njengoko wabonisa inkcaso kwabo iziphakamiso iindawo zolwandle ezikhuselweyo kwi-Southern Ocean.'
ixesha Post: May-23-2017
Company: JP METAL & NEZIXHOBO Co., LTD
China ithi AZIYI bam ...
China wafuna ukuba silahle iinkxalabo malunga amabhongo yayo lwemineral-rich Antarctica ngoMvulo, kunye lizwi esemthethweni Bei ...
Argentina Kwathi imigodi entsha la ...
abasemagunyeni Argentina, abadlali shishino kunye neemanyano kulindeleke ukuba asayine le veki uyavuma lokumba federal kudala elindelwe ...